Ndege kubva kuAlmaty kuenda kuNew Delhi paAir Astana izvozvi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Ndege kubva kuAlmaty kuenda kuNew Delhi paAir Astana izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • India Kupwanya Nhau • Kazakhstan Breaking News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Air Astana inopa kubatanidza kune vafambi vanofamba kubva kuKyiv, Bishkek, Istanbul, Tbilisi neBaku.
Air Astana ichatangazve ndege kubva kuAlmaty kuenda New Delhi, guta guru reIndia, musi wa16 Zvita 2021, iine masevhisi matatu pasvondo anoshandiswa nendege yeAirbus A320.
Kusimuka kubva kuAlmaty neChipiri, China neMugovera kwakarongerwa 07:50 uye kusvika mukati. New Delhi na11:10, nendege yekudzoka na12:20 uye kusvika muAlmaty na16:40. Nguva dzese dzemunharaunda, ine nguva yekubhururuka kwemaawa matatu nemaminetsi makumi mashanu munzira imwe neimwe.
Air Astana inopa nyore kubatana kune vafambi vanofamba kubva Kyiv, Bishkek, Istanbul, Tbilisi uye Baku.
Ruzivo Rwekufamba / Zvinodiwa Zvekupinda
Vese vafambi vari kuenda New Delhi kusanganisira vana vanofanirwa kuzadza New Delhi airport online fomu. Vapfuuri vanopfuura makore mashanu ezera vanofanirawo kurodha mhedzisiro yePCR bvunzo nemhedzisiro yakawanikwa mukati maawa makumi manomwe nemaviri vasati vasvika. Asati akwira pakubva uye zvakare mushure mekusvika, vafambi vanozoitwa bvunzo dze thermometric. Kana paine chero zviratidzo zvekoronavirus zvaonekwa, vafambi vanoendeswa kunzvimbo yekurapa.
Vafambi vasina kubayiwa kana vabaiwa zvishoma vanosungirwa kuti vatore bvunzo dzeCCIDID-19 kana vasvika vozvidzokorora pakupera kwemazuva manomwe ekuvharirwa pamba. Vatakuri vakabaiwa zvizere havabvumidzwe kubva paPCR bvunzo kana vasvika uye kubva pakuvharirwa pamba.
Air Astana ndiye anotakura mureza weKazakhstan, iri muAlmaty. Inoshanda yakarongwa, epamba uye epasi rese masevhisi munzira makumi matanhatu nenhanhatu kubva panzvimbo yayo huru, Almaty International Airport, uye kubva kunhare yayo yechipiri, Nursultan Nazarbayev International Airport.